share market(share market) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
– अनन्त्य सुन्दर काठमाण्डौ । लगातार घटिरहेको सेयर बजारमा हिजो मंगलबारदेखि सुधार आएको छ। आज नेप्से परिसूचक १०० अंकभन्दा बढीले बढेको छ। नेप्से उछाल आए पनि अझै पनि धेरै लगानीकर्ता बजार कुन दिशामा जान्छ ? भनेर अन्यौलमै छन्। ‘सोमबारको बजार हेर्दा बियरिस बजार सुरु भयो लागेको थियो। आजको बजार हेर्दा बुल अझै सकेको छैनजस्तो देखियो। आफूसँग...
सेयर लगानीकर्ता विभाजित हुँदा मुख्य माग ओझेलमा, समन्वय नहुँदा आन्दोलन शिथिल
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ। निरन्तर बढेको सेयर बजारमा केही समयदेखि गिरावट आइरहेको छ। बजारमा गिरावट आउनुमा केही लगानीकर्ताले राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीतिलाई दोष दिइरहेका छन्। केही लगानीकर्ताले भने बजारको घटाइ स्वाभाविक रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकको नीतिलाई समर्थन पनि गरेका छन्। लगानीकर्ता यसरी सधैँ विभाजन हुँदा हालसम्म गरिएको...
विदेशबाट सेयर बजारमा लगानी गर्नेको संख्या बढ्दो, भन्छन्-‘अध्ययन र स्वविवेक अतिआवश्यक’
– अनन्त्य सुन्दर काठमाण्डौ। नेपालको सेयर बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्दो छ। स्वदेशमा मात्र नभएर विदेशमा रोजगारी, अध्ययन साथै अन्य सिलसिलाका लागि पलायन भएका नेपालीले पनि नेपालको सेयर बजारमा लगानी सुरु गरेको पाइन्छ। अहिले नेपालको सेयर बजारमा जापान, कोरिया, यूएईजस्ता मुलुक रहेका अधिकांश नेपालीले लगानी गर्दै आएका छन्। कोभिड...
काठमाण्डौ । सेयर धितो कर्जाको सीमाविरुद्ध आन्दोलनरत लगानीकर्ताहरुलाई नियामक निकायहरुले वार्ताका लागि बोलाएका छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र नेपाल राष्ट्र बैंकले आन्दोलन लगानीकर्ताहरुलाई वार्तामा बोलाएको हो। ‘दुवै निकायले हामीलाई भोलि (सोमबार) वार्ताका लागि बोलाएका छन्’, पुँजीबजार सुधार संघर्ष समितिको सहसंयोजक रोहन...
सेयर धितो कर्जाको सीमाविरुद्ध लगानीकर्ताको रिले अनसन जारी
काठमाण्डौ । सेयर धितो कर्जाको सीमाविरुद्ध आन्दोलनरत लगानीकर्ताले आज बिहीबार दोस्रो दिन पनि माइतीघर मण्डलामा रिले अनसन जारी राखेका छन्। रामकृष्ण ढकालको संयोजकत्वमा गठित पुँजीबजार सुधार संघर्ष समितिको अगुवाइमा लगानीकर्ताहरुले हिजो बुधबारबाट दिउँसो ३ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म रिले अनसन सुरु गरेका थिए। सोही रिले अनसनलाई आज पनि...
रिले अनसनमा सेयर लगानीकर्ता, माग पूरा नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी
काठमाण्डौ । सेयर धितो कर्जाको सीमाविरुद्ध आन्दोलनरत लगानीकर्ताले आजबाट माइतीघर मण्डलामा रिले अनसन सुरु गरेका छन्। रामकृष्ण ढकालको संयोजकत्वमा गठित पुँजीबजार सुधार संघर्ष समितिको अगुवाइमा लगानीकर्ताहरुले आज दिउँसो ४ बजेबाट माइतीघर मण्डलामा रिले अनसन सुरु गरेका हुन्। आजबाट भदौ २९ गतेसम्म दिउँसो ३ बजेबाट साँझ ५ बजेसम्म रिले अनसन...
सेयर धितो कर्जाको सीमाविरुद्ध आजबाट अनसनमा बस्दै लगानीकर्ता
काठमाण्डौ । सेयर धितो कर्जाको सीमाविरुद्ध आन्दोलनरत लगानीकर्ताले आजबाट रिले अनसन सुरु गर्ने भएका छन्। रामकृष्ण ढकालको संयोजकत्वमा गठित पुँजीबजार सुधार संघर्ष समितिको नेतृत्वमा लगानीकर्ताहरुले आजबाट माइतीघर मण्डलामा रिले अनसन सुरु गर्न लागेका हुन्। ‘हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकमा ज्ञापनपत्र बुझाएको २ दिन बित्दा पनि हाम्रा माग...
सेयर बजारमा ‘बटम प्वइन्ट फिसिङ’ भनेको के हो ? कसरी गर्न सकिन्छ उच्च नाफा ?
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । सेयर बजारमा लगानीकर्ताको सेयर खरिदबिक्री गर्ने रणनीति फरक–फरक हुन्छ। सेयर कारोबार एउटा व्यापार भएकोले योजना तथा रणनीति आवश्यक हुन्छ। सेयर कारोबार गर्दा तल्लो न्यून विन्दुमा खरिद गर्ने र माथिल्लो उच्च विन्दुमा बेच्ने सबैको उद्देश्य हुन्छ। तर, सबै लगानीकर्ता यसमा सफल हुँदैनन्। किनकि कसैले...
राष्ट्रबैंकमा लगानीकर्ताको प्रदर्शन, समस्या चाँडै सम्बोधन गर्ने आश्वासन
काठमाण्डौ । मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याइएको सेयर धितो कर्जाको सीमाबाट असन्तुष्ट बनेका सेयर लगानीकर्ताहरुले सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंक घेराउ गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरुले राष्ट्र बैंक घेराउ गर्नुका साथै पुँजी बजार सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्न भन्दै ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका छन्। सेयर धितो कर्जाको सीमाले बजारमा निकै ठूलो नकारात्मक...
सेयर कर्जा सीमाविरुद्ध लगानीकर्ता आन्दोलित, राष्ट्र बैंक घेराउ गर्न जाँदै (फोटो फिचरसहित)
– अनन्त्य सुन्दर काठमाण्डौ । मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याइएको सेयर धितो कर्जाको सीमाबाट असन्तुष्ट बनेका सेयर लगानीकर्ताहरु नेपाल राष्ट्र बैंक घेराउ गर्न जान अहिले काठमाण्डौको पुतलीसडकमा भेला भएका छन्। सेयर धितो कर्जाको सीमाले बजारमा निकै ठूलो नकारात्मक असर परेको भन्दै लगानीकर्ताहरुले रामकृष्ण ढकालको संयोजकत्वमा गठित पुँजी बजार...
तेहेरो अंकले घट्यो नेप्से, ‘सम्बन्धित निकायबाट नीतिगत सम्बोधन हुनुपर्छ’
काठमाण्डौ । सेयर बजारमा आइतबार पहिरो गएको छ। बजार आज १०८.२६ अंकले ओरालो लागेको हो। योसँगै नेप्से परिसूचक २८१८.७३ को विन्दुमा झरेको छ। आज कारोबारकै समयमा नेप्से परिसूचक दिउँसो १ बजे ५ प्रतिशतले घटेपछि कारोबार ४० मिनेटका लागि स्थगित गरिएको थियो। दिउँसो १ बजेसम्म बजार १४७.३१ अंकले घटेको थियो। जुन हालसम्मकै सबैभन्दा उच्च अंक...
साना लगानीकर्ता भन्छन्, ‘सेयर कर्जाको सीमाले बजारमा हुने चलखेल रोकिन्छ’
– अनन्त्य सुन्दर काठमाण्डौ । मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएको सेयर धितो कर्जाको सीमाले अहिले बजार बहस र छलफलले तातेको छ। केही दिनदेखि नेप्से इन्डेक्सका साथै कम्पनीहरुको सेयरमूल्यमा पहिरो गइरहेको छ। राष्ट्र बैंकको सेयर धितो कर्जामा कडाइको निर्णयको पक्ष र विपक्षमा रहेर लगानीकर्ताबीच क्लब हाउस, फेसबुक, भाइबरलगायत विभिन्न सामाजिक...
बजारको घटाइ सुनियोजित ! ‘राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिनु मुख्य उद्देश्य’
काठमाण्डौ । आज सेयर बजारमा पहिरो गएको छ। यो समाचार तयार पार्दा बजारमा ५ प्रतिशतको गिरावट आएर कारोबार ४० मिनेटका लागि स्थगित भएको छ। बजार १४७.३१ अंकले घटिसकेको छ। नेप्से परिसूचक २७७९.३१ को विन्दुमा झरेको छ। बजार ठूला लगानीकर्ताहरु नेपाल राष्ट्र बैंक ल्याएकोे सेयर कर्जा सीमाका कारण बजारमा प्रभावित भइरहेको दाबी गरिरहेका छन्। उनीहरुले...
सेयर बजारमा लाग्यो नेगेटिभ सर्किट, कारोबार ४० मिनेटका लागि स्थगित
काठमाण्डौ । साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार सेयर बजारमा भारी पहिरो जानुका साथै नेगेटिभ सर्किट लागेर कारोबार स्थगित भएको छ। बजार खुलेको दोस्रो घन्टामा बजार ५.०३ प्रतिशतले घटेपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले कारोबार स्थगित गरेको छ। बजार ४० मिनेटका लागि स्थगित गरिएको छ। कारोबार सुरु भएको पहिलो घन्टामा नेप्से परिसूचक ४ प्रतिशतले...